ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာစဲယ်စီအိုများ | တိုယိုတာစဲယ်စီအိုကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl White Toyota Celsior 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl White Toyota Celsior 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Air...
Red Toyota Celisor 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Red Toyota Celsior 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 287 ညှိနှိုင်း
Dark blue Toyota Celsior 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key.ေ...
Pearl white Toyota Celsior 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Smart Key,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Pearl White Toyota Celsior 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...
တိုယိုတာ စဲယ်စီအော်များဟာ ဂျပန်မှာ ခေါ်တဲ့နာမည်များဖြစ်ပြီး တိုယိုတာရဲ့ ဇိမ်ခံ ဘရန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လပ်ဆပ်စ် ဘရန်ကနေထုတ်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၉ ကနေ ယနေ့ထိ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကား အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လပ်ဆပ် LS လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ စဲယ်စီအော် များသည် ဇိမ်ခံ အပြည့် ဆီဒန်ကားတွေ ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာရဲ့ ဇိမ်ခံ အခွဲတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မျိုးဆက် (၄) ဆက်လောက် ထုတ်ပြီး သွားပါပြီး။ အားလုံးသော မော်ဒယ်တွေကို အနောက်ဘီး ယက် စနစ်နဲ့ V8 အင်ဂျင်ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၂၀၀၆ ကတည်းကလေးဘီးမောင်းစနစ်နဲ့ ဟိုက်ဘရစ် ဗားရှင်းတွေနဲ့ ဘီးအကြီးအမျိုးအစားကားတွေကို ကွဲပြားစွာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဒုတိယ မျိုးဆက်နဲ့ တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၇ ထိ မျိုးဆက်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ မှာ V8 ဟိုက်ဘရစ် ပါဝါ ထိန်းချုပ်မှု ပါဝင်တဲ့ လပ်ဆပ် LS 600h/ LS 600hL တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ LS ဆိုတဲ့ နာမည်ကတော့ ဇိမ်ခံ ဆီဒန်ဖြစ်တဲ့ ( Lexury Sedan) ကနေ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ အတွေ့ရများဖြစ်တဲ့ မျိုးဆက် (၄) ခုမြောက် လက်ဆပ်တွေကိုတော့ ၂၀၀၁ မှာ ကုမ္ပဏီက စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လပ်ဆပ် 460 နဲ့ LS 460 L နှစ်ခုလုံးမှာ ၄၆၀၀ စီစီဖြစ်တဲ့ V8 အင်ဂျင်ကိုပဲ သုံးထားပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ သုံးကျတဲ့ လပ်ဆပ် စဲယ်စီအိုများဟာ တိုယိုတာ တံဆပ်နဲ့ ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်ကို V8 သုံးတဲ့ ၄၃၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာမှာ ၅ ချက်နဲ့ ၆ ချက်ထိ အော်တို ဂီယာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဆက် (၄) ဆက်မျိုး ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၇ ကနေ ဌင်းနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ကားတွေကတော့ အင်ဂျင် ၄၆၀၀ စီစီကနေ ၅၀၀၀ စီစီထိကို ရှိပါတယ်။ ဂီယာ (၈) ချက် အော်တိုတွေနဲ့ စီဗီတီ ဂီယာတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ကနေ နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်တွေမှာ ဟိုက်ဘရစ် ဗားရှင်းတွေကိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ မြင်းကောင်ရေအား ၄၃၇ ထွက်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ၄၃၀၀ စီစီရှိတဲ့ကားတွေကျတော့ မြင်းကောင်ရေ ၂၉၀ ထွက်ပါတယ်။
ဆလွန် အပြည့်ဆိုဒ်ကားတွေ ဖြစ်ပြီး လူ (၅) ယောက်စီးနိုင်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ခရောင်းတို့လို့ တော်ဝင်နဲ့ ကြည့်ရတာ ယဉ်ပြီး ခံလှတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြူခဲမီး၊ အတွင်းပိုင်း ကျွန်းခွက်တွေ အပြင် ကားစီယာတိုင်တွေမှာ ပါ ကျွန်းခွက်တွေ ပါပါတယ်။ ဒတ်ရ်ှဘုတ်နဲ့ တံခါးလိုင်းတွေမှာ ကျွန်းခွက်ပုံစံတွေကို ဟိုက်လိုစ်ခ် လုပ်ထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။သားရေး ထိုင်ခုံ၊ လယ်သာ ထိုင်ခုံတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။၂၀၀၇ နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်တွေမှာ တိုယိုတာ မတ်ခ်ျစတဲ့ကားတွေနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ ပုံသဏ္ဍာန်အပိုင်းမှာလည်း ပိုပြီးတိုးမြင့်ထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးလုံးတွေက အစ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ထားပြီး ကားအသွင်အပြင်ကို တိုးမြင့်ထားပါတယ်။
လပ်ဆပ် စဲယ်စီအိုကားများ ဆလွန်ကားတွေရဲ့ လှပမှုကို အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်နဲ့ လှပတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါ စီယာတိုင်၊ အဲယာကွန်း၊ အလွိုင်းဝှီး၊ အော်တို ဘရိတ် စနစ်၊ တီဗီနဲ့ အစရှိတဲ့ နည်းပညာမြင့် ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်တော့ အနည်းငယ်ကြီးတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ တွေ့ရများတဲ့ ၂၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၇ ထိကို တွေ့၇မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်တွေ အတွက် ၁၀၀ ကျပ်သိန်းကနေ ၂၉၀ ကျပ်သိန်း ထိကို အသီးသီး ဈေးရှိတာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းရဲ့ ကားတင်သွင်းခွင့် ပေါ်လစီအရ ၂၀၀၉ ထိကနေ စပြီး ၂၀၁၂ ထိကို ဖရီ ပါမစ်ဖြစ်ပြီး ၁၃၅၀ အောက် စီစီရှိတဲ့ကားတွေကို ယူအက်ဒီ ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ယခု အင်ဂျင် ၄၃၀၀ စီစီရှိတဲ့ကားတွေကိုတော့ ဌင်းရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေမှာ ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ တစ်ပတ်ရစ်ထဲက ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၆ ထိရှိတဲ့ကားတွေကို ဈေးနှုန်း သင့်တင့်စွာ ဖြင့် စီးနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။